How To Ask Smart Questions ( Before You Ask ) | TechSectors
ဒီအကြောင်းကို ရေးချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ - ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ မဖြစ်မနေ ကျေးဇူးတင်ရမယ့် သူတွေကတော့ကိုနေမင်းမောင် ( စာချွန်လွှာပို့ပြီး ဖိုရမ်အတွက် လိုအပ်နေတာတွေ ကျွန်တော့်ကို အကြံပေးခဲ့တဲ့သူပါ ) - နောက်တစ်ယောက်က ကိုဘုရင့်နောင် ( သူကတော့ ဒီအကြောင်းအရာမှာ ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တွေ ပါဝင်သင့်မယ်ဆိုတာ အကြံပေးခဲ့တဲ့ သူပါ ) - သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တွန်းတိုက်အား မရှိပဲ ဒီအကြောင်းကို တော်ယုံ ရေးဖြစ်ခဲ့အုံးမယ် မထင်ဘူး - ခုတော့ အရင်က ရေးဖို့ တွေးမိတဲ့ စိတ်အခံရယ် - သူတို့ရဲ့ ကူညီမှုတွေကြောင့် ဖိုရမ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ် - ရေးမယ့် အကြောင်းက - မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာပါ -
ဖိုရမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြား ပြင်ပလောကမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားသူတစ်ယောက် မေးမြန်းလာသမျှကို တစ်ဖက်လူ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားအောင် ဖြေကြားပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးအားထား ပြုရသူကိုပဲ အတတ်ပညာ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး - ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုယ်နားလည်ချင်တဲ့ သဘောတရားကို သိရှိနားလည်ပြီးသူ တစ်ယောက်ကနေ ဖြေဆိုချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် - ချက်ချင်းဖြေကြားမပေးနိုင်ရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေကြားလိုစိတ်ပေါ်လာအောင် မေးမြန်းနိုင်တာဟာလည်း အတတ်ပညာရပ်တစ်ခုပါပဲ - ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပြီ - ဖိုရမ်ထဲမှာ သူ့ကဏ္ဍနဲ့ သူ တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိကြတယ် - ကဏ္ဍလိုက်မှာ ကိုယ်မသိနားမလည်တာတွေ ရှိရင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင် သလို ကိုယ်သိနားလည်ထားတာ ရှိရင်လည်း တစ်ခြား အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူ တစ်ယောက်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ပါတယ် - ဒီသဘောကို ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ မျှဝေသူဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ဖူးပါပြီ - ကိုယ်သိနားလည်ထားတာတွေကို တစ်ခြား အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုစိတ်ခံယူချက်မျိုးနဲ့ ကူညီရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မျှဝေသူတစ်ယောက် သိရှိထားရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ -မျှဝေသူများတွင် ပြည့်စုံရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုပြီး ရေးပြီးခဲ့ပါပြီ - အဲ့တော့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ် - ကိုယ်မသိနားမလည်တာတွေကို ဝင်ရောက် မေးမြန်းတဲ့ နေရာမှာရော ဘယ်လို အချက်အလက်တွေပေါ် အခြေခံပြီး ရေးသားမေးမြန်းရပါမလဲ - ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခံယူချက်မျိုး ထားရှိရပါမလဲ - အဲ့လို မေးမြန်းသူတစ်ယောက်အတွက် သိထားဖို့ လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေ အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ် -
မေးခွန်းမမေးမီ သိရှိသင့်သည့် အချက်များ
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖိုရမ်မှာ Thread အသစ်တင်ပြီး ဖြစ်စေ - ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ တစ်ယောက်ကို စာချွန်လွှာပို့ပြီး ဖြစ်စေ - မမေးမြန်းခင်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို အရင်ဦးဆုံး လုပ်ဆောင်ထား ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်သင့်ပါတယ် -
- ဖိုရမ်ထဲမှာ မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဦးစွာဖြေကြား ပေးထားပြီးမှု ရှိမရှိ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
- မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Web ပေါ်မှာ ဖြေဆိုပြီးသား ရှိမရှိ ရှာဖြွေကည့်ပါ။
- မိမိမေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သတ်နေတဲ့ Manual တွေကနေတစ်ဆင့် အဖြေတွေ့အောင် ရှာဖြွေကည့်ပါ။
- FAQs လို့ခေါ်တဲ့ Users တိုင်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေမှာ ကိုယ်မေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှု ရှိမရှိ လေ့လာကြည့်ပါ။
- အဖြေတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ - စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနေ ချဉ်းကပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
- ကျွမ်းကျင်နားလည်မှု ရှိတယ်လို့ သေချာပေါက် ကိုယ်သိထားတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို မေးမြန်းကြည့်ပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က Programmer တစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ်တွေ့ချင်တဲ့ အဖြေကို Source code တွေဖတ်ပြီး ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
မမေးခင် လေ့လာပါ။ မိမိ မေးမြန်းလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မေးခွန်းထုတ်ပြီး စတင်မေးမြန်းတော့မယ်ဆိုရင် မေးခွန်းမစတင်ခင်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေ အဦးဆုံး လေ့လာထားခဲ့ပြီးပြီလဲ - ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားခဲ့သလဲ - စတဲ့ ပြဿနာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်မှာ မမေးမြန်းခင်တည်းက ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဦးစွာဖော်ပြသင့်ပါတယ် - ဒီလို ဖော်ပြထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ ငပျင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး - ကိုယ်သိချင်တာကို ကိုယ်အရင်တွေ့အောင်ရှာတယ် - ရှာလို့ဘယ်လိုမှ မတွေ့နိုင်တော့မှ ( သို့တည်းမဟုတ် ) နားလည်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့မှ တစ်ဖက်လူရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို စာနာမှုနဲ့ မေးမြန်းတယ် ဆိုတာမျိုး မေးမြန်းခံရသူ နားလည်အောင် အရင်ဦးဆုံး ကြိုးစားဖော်ပြသင့်ပါတယ် - ဒီ့ထက်မှ ကိုယ့်မေးမြန်းချက်ကို ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိစေ ချင်သေးတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုထဲက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဖြေကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အကြောင်း အရာတွေကို နားလည်ခဲ့တယ် - ဘာတွေကိုတော့ မှတ်သားစရာ ရခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုး တစ်ခြားသူတွေ အတွက် ချပြသင့်ပါတယ်။
အားလုံးထဲမှာ ကိုယ်သိနားလည်ချင်တဲ့ အရာကို အလွယ်ကူအလျင်မြန်ဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ Google search ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ပါ - တကယ်လို့ အဲ့လိုရှာလို့မှ မတွေ့ခဲ့ဘူး ဆိုရင်လည်း "မေးမြန်းချက်ကို ရေးသားတဲ့ အချိန်မှာ - ကျွန်တော်/ကျွန်မတော့ ဒီစကားစုတွေနဲ့ Google ကိုသွားပြီး ရှာခဲ့တယ် - ဒါပေမယ့် စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ ဘာအဖြေတစ်ခုမှ မရခဲ့ဘူး" ဆိုတာမျိုး ထည့်သွင်း ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကိုယ်ရှာဖွေခဲ့တုန်းက အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ Search terms ဟာ ကိုယ့်ကို ဖြေကြားပေးမယ့် သူအတွက်လည်း ထည့်စဉ်းစားဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတာ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ သိသာစေလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက် ရှိသေးတာ အဲ့လို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ ပြဿနာတူညီ ဖြစ်ဖူးသူ တစ်ယောက်က ဒီအကြောင်းအရာကို တွေ့ရှိပြီး - သူပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ပြေလည်ခဲ့တဲ့ Search terms ကို ညွှန်ပြပေးဖို့ အတွက် ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ် - ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်လိုလားတဲ့ အဖြေကို ခဏချင်း ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားရခက်တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို Google လိုမျိုး Enter တစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့ ချက်ချင်းအဖြေပြန်ရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ - အချိန်ပေးပါ - စာဖတ်ပါ - အကြောင်းအရာနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ FAQs တွေကို နားလည်ခဲ့ပြီလား သေချာပြန်ဆန်းစစ်ပါ - ဖတ်ပြီးရင် ခဏလောက်နားပါ - ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ကို မမေးခင် ဒီပြဿနာကိုပဲ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်တွေးကြည့်ပါ - မယုံမရှိပါနဲ့ - ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီးသား သူတစ်ယောက်ဟာ မေးမြန်းသူဆီက ရလာတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အသွားအလာကို ကြည့်ယုံနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လောက် စာဖတ်ထားသလဲ ?? မမေးခင် ကိုယ်ဘာတွေ တွေးထားခဲ့ပြီးပြီလဲ ဆိုတာ ဒက်ကနဲ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခြေအနေတွကို ကျွမ်းကျင်သူက သိရှိသွားတာနဲ့ မေးမြန်းသူရဲ့ အားထုတ်ခဲ့မှုပေါ် မူတည်ပြီး ကူညီပံ့ပိုးလိုစိတ်က အလိုလို ဖြစ်တည်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မေးခွန်းအများကြီးကို တစ်ဗရိတ်တည်းနဲ့ တရစပ်ပစ်မသွင်းပါနဲ့ - ဘာကြောင့်လဲဆို ကိုယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဘာအဖြေတစ်ခုမှ ပြန်မရပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် - ( ဒါမှမဟုတ် အနှစ်သာရ မရှိတဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အဖြေတွေ ဗျောက်သောက် ပြန်ရပါလိမ့်မယ် )
ကိုယ့်မေးခွန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ - မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီး ပြန်တွေးပါ - ပြီးစလွယ် စီးစလွယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဟာ ပြီးစလွယ် စီးစလွယ်အဖြေပဲ ပြန်ရပါလိမ့်မယ် ( ဒါမှမဟုတ် ဘာတစ်ခုမှ ပြန်မရ တတ်ပါဘူး ) - တတ်ယောင်ကား ပုံစံမျိုးနဲ့ မေးခွန်းမမေးမိစေဖို့ကိုလည်း ဂရုပြုပါ - တတ်ယောင်ကား လုပ်ပြီး ( မသိလို့မေးတာ မဟုတ်ဘူး - ငါကသိတယ် - ဒါလေး မင်းများဆွေးနွေးပေး နိုင်မလားလို့ မေးတာ ဆိုတဲ့ အထက်စီးက မေးတဲ့ပုံစံမျိုး ) ယူဆချက် အမှားပေါ် အခြေခံပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဟာ မြန်မာလူမျိုး ဖြေကြားပေးမယ့်သူ တစ်ယောက်အတွက် အားတုံ့အားနာဖြစ်စေသလို - လိုလားချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ယူဆချက်အမှားကို ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတာနဲ့တင်ပဲ မလိုအပ်ပဲ အချိန်အမြောက်အများ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို နောက်မှာထားပြီး လက်တွေ့ နားလည်သိရှိမှုကိုပဲ မေးမြန်းမှု အကြောင်းအရာမှာ ဦးစားပေးတင်ပြပါ။
ကိုယ့်မေးခွန်းအတွက် အဖြေပြန်ရကို ရလိမ့်မယ်/ဖြေကို ဖြေပေးရမယ်လို့ ဘယ်တော့မှ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်မထားပါနဲ့ - ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - ဖိုရမ်တစ်ခုရဲ့ သဘောတရားဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စာနာနားလည်စိတ်နဲ့ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း တစ်စွန်းတစ်စ မယူပဲ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း ကူညီဖေးမ လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် - ငွေပေးမေးမြန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး - ကိုယ်မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ စဉ်းစားပေးဖို့ သင့်သလား - စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလား - ဘယ်လိုပြဿနာရပ်တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားသလဲ - ဒီမေးခွန်းကနေ ဘယ်လို အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေ ရနိုင်သလဲ - စဉ်းစားသင့်တဲ့ ပြဿလေးတွေက ဘာတွေလဲ .... စတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်ကြားချက်တွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် - ကိုယ်ရဲ့ ဖော်ပြချက် မေးခွန်းထဲမှာ -
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ဆောင်နည်း အသေးစိတ်ကို သေသေချာချာလေး ရေးပေးပါ " ဆိုတာမျိုးထက် "
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် တစ်ယောက်ယောက်များ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြနိုင်မလား ?? "
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ လေ့လာမှုထဲမှာ ဘာတွေများ လိုအပ်ချက် ရှိနေပါသလဲ ?? "
" ဒီပြဿနာရပ်အတွက် ဘယ်လိုနေရာများတွေကိုများ လေ့လာဖို့ သင့်ပါသလဲ ?? "
စတဲ့ ဖော်ပြချက်မျိုးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဒီပြဿနာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်တကယ် သိနားလည်လိုစိတ် ပြင်းပြနေတယ် ဆိုတာကို သိသာစေသလို ဖြေကြားပေးသူ အပေါ်မှာလည်း တစ်ဖက်လူရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေအတွက် စာနာနားလည်တဲ့ သဘော သက်ရောက်စေပါတယ်။